Burmese taste - Iora: ရှော့ကပ်မုန့် လင်မယားလုပ်စားကြမယ်
Posted by Iora at 1:51 AM
စူးနှယျလေး March 18, 2012 at 2:19 AM
လုပ်စားချင်တယ် အိုးမရှိဘူး... ပဲပြုတ်လည်းမရှိဘူး
ဒီနည်းနဲ့ မုန့်ပြစ်သလက်အပါးပဲ လုပ်စားကြည့်မယ်... ပဲပြုတ်မပါပဲ
စူးနှယျလေး March 18, 2012 at 2:20 AM
ဘ်ိန်းမုန့်လေးလည်း မျှော်နေတယ်နော် :D
အိုး စပါယ်ရှယ်. စပါယ်ရှယ်ဘဲ။
Kyaw Hnin Se Lwin March 18, 2012 at 3:55 AM
Evy March 18, 2012 at 4:32 AM
မြတ်ကြည် March 18, 2012 at 5:29 AM
Aunty Oo March 18, 2012 at 6:27 AM
နေမကောင်းလို.စာမရေးနိုင်ပေမဲ့ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။အိုင်အိုရာ လုပ်ထားတာစားကောင်းမှာပါ။အန်တီ မှာလဲဂျပန်tako ball
jasmine(တောင်ကြီး) March 18, 2012 at 6:33 AM
ကြိုက်တဲ့မုန့်ထဲသူလဲပါတယ် အိုးတော့မရှိသေးလူး ၀ယ်ရမယ်နော်
I like it too.We've same taste.They all look delicious.I'm also bz n 4z:)
Candy March 18, 2012 at 7:21 AM
ညီမလည်း မုန့်လင်မယား အရမ်းကြိုက်တာ..
ရှော့ကပ်ပဲဖြစ်ဖြစ် စားကောင်းရင်ပြီးရော ဟီးဟီး :D :D
Qt March 18, 2012 at 7:55 AM
ရေမုန့် အရမ်းကြိုက်တယ် မမရေ
စားချင်လိုက်တာ ဂလု ဂလုပဲ :D :D
မီးမီးငယ် March 18, 2012 at 9:53 PM
မဒမ်ကိုး March 19, 2012 at 1:07 AM
အားးး ဟဟ ကောင်းလိုက်တာ လုပ်စားမယ် လုပ်စားမယ်မမရေ
အောင်မလေး သွားရေတောင်ကျတယ် ဗျိူးးး
တခုပြီးတခုပရင့်ထုတ်လိုက် လုပ်ကြည့်လိုက်နဲ့ ဘောစိစာရွက်တွေတော့တော်တော်ကုန်နေပြီ ဟဟ
ပါရမီဖြည့်ဖက်လေး March 19, 2012 at 3:33 AM
ညီမလည်း မုန့်လင်မယားအရမ်းကြိုက်တယ်။ စားချင်လို့ ဒယ်အိုးရှာကြည့်ပေမယ့် မတွေ့တော့ လုပ်မစားဖြစ်ဘဲ အောင့်ထားရတာ။ အခု အစ်မလုပ်ထားတဲ့ မုန့်တွေမြင်ပြီး ပိုလို့တောင် စားချင်လာပြီ။ :(
subuueain March 19, 2012 at 4:18 AM
မုန့်လင်မယား အရမ်းကြိုက် :) ။ ဒါပေမဲ့ အိုးမရှာကြည့်ဖြစ်သေးဘူး။ ဘယ်နားသွားရှာရမလဲ စဉ်းစားနေတာနဲ့ :P
mstint March 19, 2012 at 8:13 AM
တီတင့်ရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးမြန်မာမုန့်တွေထဲမှာ မုန့်လင်မယားကထိပ်ကပဲ အိုင်အိုရာရေ။
ရောင်းဘန်းတွေထက် ကိုယ်တိုင်လုပ်စားရတာ အစာများများထည့်တော့ ပိုစားလို့ကောင်းမယ်။
မိုးငွေ့...... March 19, 2012 at 9:24 AM
ကော်ဖီခွက်လေးကိုမြင်ပြီး ကော်ဖီသောက်ချင်စိတ်လေးဖြစ်သွားလို့ တစ်ခွက်ထဖျော်လိုက်ဦးမယ်..း))
မိုးငွေ့...... March 19, 2012 at 9:28 AM
ကော်ဖီခွက်လေးတွေ့လို့ ကော်ကော်သောက်ချင်စိတ်ပေါက်သွားတယ်....။ တစ်ခွက်ထဖျော်လိုက်ဦးမယ်...။
Iora March 19, 2012 at 10:53 PM
ကုိုယ်လည်းပဲပြုတ်ပြုတ်ထားရင်သူနဲ့ စားလို့ ရတာတွေလျှောက်လျှောက်လုပ်နေတာ။
ဘိန်းမုန့် တင်ပေးမယ်နော်။ ကြာမလားတော့မသိဘူး။း)
လုပ်စားနော်။ လွယ်ပြီးအရမ်းစားလို့ ကောင်းတယ်။ သိလား။
Evy လုပ်တဲ့မုန့် လေးတွေကိုလည်းသိပ်စားချင်တာ။ လှလွန်းလို့ လေ။
အပျင်းထူတာချင်းတော့တူနေပြီ။ ပျင်းပေမဲ့ဟင်းကတော့ချက်ဖြစ်တယ်။း)စာတွေရေးနုိုင်ချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့တစ်ခါတစ်လေလုံးဝမရေးချင်ဘူး။
နေမကောင်းဘူးလား။ အမြန်နေကောင်းပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်နော်။
အုိုင်အိုရာ့အိုးကလည်းဂျပန်တွေလုပ်စားတာတော့တီဗီထဲမှာတွေ့ ဘူးတယ်။ ဒါပေမဲ့ဘာတွေလုပ်စားလည်းတော့မသိဘူးရယ်။
ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ် ဆီလေးအရင်ထဲ့ထားမှကျွတ်တာ။း)
လုပ်စားဖြစ်အောင်လုပ်စားနော်။ တစ်ခါလုပ်ပြီးတာနဲ့ နောက်လုပ်စားဖြစ်မှာသေချာတယ်။ စူပါအီးဇီးမို့ လေ။
I know I know we have the same taste except chili. right? :D
မုန့် လင်မယားကြိုက်တဲ့သူတွေများတယ်နော်။ မြန်မာပီသကြပါပေတယ်း))
ရေမုန့် ကြိုက်တာလည်းတူနေပြန်ပြီ။း)
ကုန်သွားလည်း ပြန်လုပ်ပေးလုို့ ရတယ်။ မြန်တယ်။ ပဲပြုတ်လည်းရှိသေးတယ်။
ဘော့စ်မျက်စိနောက်နေမယ်နော်။။ မုန့် လင်မယားမစားရဘဲ မုန့် ဟင်းခါး (အလုပ်လုပ်ခိုင်းတာကိုပြောတာ)စားနေရအုန်းမယ်။း) လုပ်စားဖြစ်အောင်စားသိလား။ သိပ်လွယ်တယ်။ ပြီးတော့လည်းမုန့် ရည်လေးတွေထဲ့လုိုက်မှောက်လုိုက်လှန်လိုက်လုပ်ရတာလည်းတကယ်အိုးပုတ်တမ်းဆော့နေရသလုိုဘဲ။း)
မုန့် လင်မယားကြိုက်တဲ့သူများတယ်နော်။ ဒို့ လည်းဂျပန်ဆုိုင်မှာအိုးတွေ့ တော့သတိထားမိပြီးမုန့် လင်မယားလုပ်စားမယ်ဆိုပြီးဝယ်ထားလိုက်တာ။
အိုးကတော့ဂျပန်ဆုိုင်တွေမှာတွေ့ ရတတ်တယ်သိလား။ ဂျပန်အုိုးလေးက မုန့် လင်မယားလုပ်ဘုို့ အရွယ်တော်ဘဲ။
လုပ်စားကြည့်ရင်လေ..၀ယ်စားတာထက်တောင်ကောင်းပါလားလုို့ တွေးမိမှာသေချာတယ်။း)
Nyi Linn Thit March 20, 2012 at 1:24 AM
မုန့်လင်မယားလေးတွေက ချစ်ချစ်ခင်ခင် တပေါင်းတစည်းထဲမို့ စားချင်စရာ မအိုင်အိုရာရေ..၊း) ခရီးသွားတာရော..၊ အလုပ်များတာရော ပေါင်းပြီး အခုမှ ရောက်လာရတယ်ဗျာ..၊ ကိုယ်က နောက်ကျသူဆိုတော့ မုန့်လင်မယားအိုးပဲ ဆေးပြီး ပြန်သွားပါတယ်...။း(
Iora March 20, 2012 at 6:52 AM
အုိုးမဆေးရပါဘူး။ ထပ်လုပ်ကျွေးလို့ ရပါတယ်။း)
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) March 23, 2012 at 6:46 AM
ဒီမှာလည်း အိုးမရှိလို့ မလုပ်စားဖြစ်ဘူး
ငုံးဥလေးထည့်ရင် ပိုတောင် ကောင်းသေးနော်း)
ရေနွေးကြမ်းနဲ့ မုန့်လင်မယား လိုက်မှလိုက်
လုပ်ရတာတော့ပျော်စရာဘဲ။ အုိုးပုတ်တမ်းဆော့ရတာနဲ့ တူတယ်။း)
ရေနွေးကြမ်းလေးနဲ့ ဆုိုတော့ပိုဝင်တာပေါ့..ဟ ဟ။
AH March 24, 2012 at 7:26 PM
စားချင်လိုက်တာနော်... ရှလွတ် ရှလွတ်... :)
san htun March 25, 2012 at 9:03 AM
တခါမှ မလုပ်စားဖူးဘူး..မမအိုင်အိုရာ ပြောပြတော့မှ လွယ်မှန်းသိတာ..နောင်များကြုံရင် လုပ်စားဦးမယ်..
ကြိုက်တယ်လား။ တော်တော်များများကြိုက်ကြတယ်နော်မုန့် လင်မယားကို။
လွယ်မှလွယ်စန်းထွန်းရေ။ ရှော့ကပ်နည်းလေ။ အရသာကလည်းတူတူဘဲ။ ရောင်းတမ်းထက်တောင်ပိုကောင်းတယ်ကုိုယ်ကြိုက်တာတွေများများကြီးထဲ့ထားတော့လေ။
Mon Petit Avatar March 28, 2012 at 2:45 AM
Look delicious sis, will try sometime sis! Miss you!
Iora March 29, 2012 at 1:16 AM
I bet you will enjoy trying this. ..D
sis, what is ဆန်မှုန် called in English?
Iora April 22, 2012 at 7:24 PM
It is called "Rice flour".
Chaw Su June 25, 2012 at 10:27 PM
အိုင်အိုရာ ရေ- သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် လုပ်နည်းတောင်းလို. link လေးပေးလိုက်တယ်နော်...း)
Iora June 25, 2012 at 11:06 PM
Maung Zo Phay December 12, 2012 at 9:18 PM
i love too i just click to my bookmarks...huu i miss our country..city of yangon...specialy ကျေက်မြောင်း မှာ ဟိုးတုံန်းက မုန်လင်မယား၊လမ်းသရဲမုန့် ရောင်းတဲ့ဆိုင် ကောင်း ရှိဘူး တယ်..သတိရတယ်ဗျာ..ဒါနဲ့မသိလို့မေးပရစေ ရေမုန့် နဲ့ လမ်းသရဲမုန့် က အတူတူလား အမရေ.?
Iora January 5, 2013 at 7:57 PM
ကျမသိသလောက်တော့ရေမုန့် ကမုန့် ရေပါးလို့ လည်းခေါ်တယ်။ ပွဲဈေးတွေမှာဒယ်ပြားကြီးတွေနဲ့ အကြီးကြီးလုပ်ပြီးမှသုံးလေးခေါက်ခေါက်ပေးတာကိုခေါ်တာပါ။ လမ်းသရဲမုန့် ဆုိုတာကကျမတို့ ခပ်ငယ်ငယ်တုန်းကမှပေါ်လာတာပါ။ ရေမုန့် ပုံစံမျိုးလုပ်ပြီးအစုံလျှောက်ထဲ့လို့ လမ်းသရဲမုန့် လို့ ခေါ်တယ်လို့ လည်းသိပါတယ်။ အဲဒါကိုရေမုန့် အစစ်နဲ့ နောက်ပုိုင်းထွေးခေါ်လာကြရင်းရှုပ်လာတာပါ။
ရေမုန့် အစစ်ကအ ပဲပြုတ်၊ နံနံပင် နဲ့ ကြက်သွန်မြိတ်ဘဲထဲ့တာပါ။ တရွာတပုဒ်ဆန်းဆုိုတော့နဲနဲလေးတွေတော့ကွဲရင်လည်းကွဲနုိုင်ပါတယ်။
Kai September 3, 2013 at 5:29 AM
လုပ်စားကြည့်ဦးမှပဲ ဆန်မှုန့်ဖျော်နည်း သိသွားပြီ သူငယ်ချင်းတယောက် အိုးလက်ဆောင်ပေးထားတယ် မစမ်းရသေးဘူး
Iora September 22, 2013 at 10:56 AM
ခုမှတွေ့ လို့ ။
ကိုယ်ကြိုက်တာတွေအများကြီးထဲ့လို့ ရတော့လေ။း)
ပိုးပိုးရဲ့ရိုက်ချက် September 15, 2013 at 10:27 PM
မုန့် လင်မယားကြိုက်တယ် တခါလုပ်စားဖူးတယ် ဆီက အရမ်းညှော်လာလို့အိမ်ရှင်အားနာလို့ ထပ်မလုပ်စားဖြစ်တာ
အခု အိုင်အိုရာမုန့် ပဲ တပန်းကန်လုံးမသွားပီ :P
Iora September 22, 2013 at 10:57 AM
အပြင်မှာလုပ်လို့ ရရင်ကောင်းမယ်။း)
မသွား။ မသွာ။း)
sis.. can I use chickpea instead of pel pyoute?
Iora October 7, 2013 at 7:46 PM
If you like the chickpea then it might go well for you.
If you are using the can chickpea why don't you try the can of garden pea which is the same thing of pe pyote. I think garden pea with can is the better substitution. Thanks for visiting me.
Yee October 8, 2013 at 9:47 AM
Is garden pea regular green pea? I just don't know where to buy pel pyoute :( What's it called in grocery store? Do you buy it from food store?
Iora October 8, 2013 at 8:40 PM
If you can go to the Indian Store you can buy whole Yellow pea or whole white pea or Vatana or Garden Pea or Green Pea there. All can be made as pe pyote. (Chick pea is " ka la pe" so you can imagine your mont lin mayar with ka la pe pyote.) The only thing is that Green Pea comes out as green color. I also buy it from Indian Store. I usually made with Whole Yellow pea but currently I made it with Whole white pea, which turned out as same thing.
If you cannot go to the Indian Store, some people use Garden Pea with can as pe pyote. I have never made with Green pea but it seems they are the same.
thant zaw oo December 18, 2014 at 10:58 AM
ကောင်း လုပ်စား try